MB 2015 aprily - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach > MB 2015 Aprily
Tamin'iny volana lasa iny, dia pasitera GCI maro no nanatrika fiofanana momba ny asa fitoriana ny filazantsara, antsoina hoe "Outside the Walls", notarihan'i Heber Ticas, mpandrindra nasionaly an'ny ministeran'ny Filazantsara ho an'ny Fahasoavana. Natao izany tamin'ny fiaraha-miasa amin'ny Pathways of Grace, iray amin'ireo vondron-tsika any akaikin'i Dallas, Texas. Nanomboka tamin'ny fampianarana ny zoma ary nanohy ny asabotsy maraina ny pasitera dia nihaona tamin'ireo mpikambana tao am-piangonana mba handeha hitety varavarana manodidina ny toerana fivorian'ny fiangonana ary manasa olona avy ao amin'ny fiangonana eo an-toerana ho amin'ny andro mahafinaritra ny ankizy amin'ny andro manaraka.
Ny vavantsika roa dia nandondona varavarana ary nilaza tamin'ilay lehilahy tao an-trano fa izy ireo dia misolo tena ny fiangonan'ny GCI ary avy eo dia nanonona ny andron'ny ankizy mahafinaritra Nilaza tamin'izy ireo ilay lehilahy fa tsy mino an'Andriamanitra izy satria tsy namaha ny olan'izao tontolo izao Andriamanitra. Raha tokony handeha, ny pasitera dia niresaka tamin-dralehilahy. Nianaran'izy ireo fa teorista mpandrafitra dia mino fa ny fivavahana no mahatonga ny olana maro eto amin'izao tontolo izao. Gaga sy talanjona ilay lehilahy rehefa niaiky ny pasitera fa tokony hiresaka izany hevitra izany ary nasongadiny fa tsy dia liana loatra momba ny fivavahana koa i Jesosy. Namaly ilay lehilahy fa nandrakitra ireo fanontaniana izy ary mitady valiny.
Rehefa nandrisika azy hametraka fanontaniana fanampiny ny pasitera, dia gaga izy. "Tsy mbola nisy nilaza tamiko talohan'izay", hoy izy. Hoy ny pasitera iray: "Mihevitra aho fa ny fomba fametrahanao fanontaniana dia ahafahanao mahazo valiny marina izay omen'Andriamanitra ihany." Rehefa afaka 35 minitra teo ho eo, dia niala tsiny ilay rangahy noho ny fisolokiana mafy sy tsy manohitra azy ireo ary niteny hoe: "Tiany ny fomba itiavanao anao, amin'ny maha-pasitera GCI anao, momba an'Andriamanitra". Nifarana ny iray tamin'ireo pasitera nahazo toky azy hoe: "Ilay Andriamanitra fantatro sy tiako dia tia anao ary maniry hanana fifandraisana aminao. Tsy dia manahy loatra izy na miahiahy momba ireo teôni-tsikombakomba ao aminao na mankahala ny fivavahana. Hifandray tanana aminao izy amin'ny fotoana mety dia ho azonao izany fa Andriamanitra. Mihevitra aho fa hanao izany ianao. » Nijery azy ilay lehilahy ary nanao hoe: “milay izany. Misaotra nihaino sy nisaotra noho ny nanam-potoana hiteny amiko. "
Mizara ny hevitro momba ity tantara avy amin'ny zava-nitranga ity aho satria manazava fahamarinana manan-danja iray: ny olona miaina ao amin'ny haizina dia misy fiantraikany tsara rehefa zaraina ampahibemaso amin'izy ireo ny fahazavan'i Kristy. Ny fifanoheran’ny mazava sy ny haizina dia fanoharana matetika ampiasaina ao amin’ny Soratra Masina mba hampifanoherana ny tsara (na fahalalana) amin’ny ratsy (na ny tsy fahalalana). Nampiasa izany i Jesosy mba hiresaka momba ny fitsarana sy ny fanamasinana: “Voatsara ny olona, ​​satria na dia tonga amin’izao tontolo izao aza ny mazava, dia tia ny maizina noho ny mazava izy. Satria ny zavatra rehetra ataony dia ratsy avokoa. Izay manao ratsy dia manalavitra ny mazava ka aleony mijanona ao amin’ny maizina mba tsy hisy hahita ny habibiany. Fa izay mankatò an'Andriamanitra dia mankamin'ny mazava. Izany dia mampiseho fa mitondra ny fiainany araka ny sitrapon’Andriamanitra izy » (Jao 3,19-21 Fanantenana ho an’ny rehetra).
Ilay ohabolana fanta-daza manao hoe: “Aleo mandrehitra labozia toy izay manozona ny haizina” dia nambaran’i Peter Benenson ampahibemaso voalohany tamin’ny 1961. Peter Benenson no mpisolovava britanika nanangana ny Amnesty International. Ny labozia iray voahodidin'ny tariby mikitoantoana no lasa tandindon'ny fiaraha-monina (jereo ny sary eo ankavanana). Ao amin’ny Romana 13,12 (HANATRIKA HO ANY REHETRA) ny apostoly Paoly dia nilaza zavatra toy izao: «Tsy ho ela ny alina ary ho avy ny andron'Andriamanitra. Izany no antony itiavantsika ny asan'ny maizina amin'ny alina ary mitazona ny fitaovam-piadiana ho solon'izay. » Izany indrindra no nataon’ny pasitera roa nataontsika tamina lehilahy iray nipetraka tao anaty haizina raha nandeha nitety trano teny amin’ny trano fivorian'ny fiangonana tany Dallas.
Tamin’izany izy ireo dia nampihatra araka izay nolazain’i Jesosy tamin’ny mpianany ao amin’ny Matio 5:14-16 HFA:
«Ianareo no hazavana izay manazava an'izao tontolo izao. Ny tanàna avo iray any an-tendrombohitra dia tsy afaka miafina. Tsy mandrehitra jiro ianao ary avy eo manarona azy io. Mifanohitra amin'izany: napetranao mba hanome hazavana ho an'izay rehetra ao an-trano. Toy izany koa, ny fahazavanao dia tokony hamirapiratra eo anoloan'ny olona rehetra. Tokony hanaiky ny rainao any an-danitra amin'ny asanao izy ireo ary hanome voninahitra azy koa. » Mieritreritra aho fa indraindray manamaivana ny fahafahantsika mitaona an'izao tontolo izao ho tsara kokoa. Matetika isika manadino ny fomba fitarihan'ny fahazavan'i Kristy amin'ny olona iray fotsiny. Mampalahelo fa aseho ao amin'ilay sary an-tsary etsy ambony, ny sasany dia aleony manozona ny haizina toy izay aleana ny hazavana. Ny sasany manantitrantitra ny ota fa tsy mizara ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavany.
Na dia manarona antsika aza ny haizina indraindray, dia tsy mahafaly an'Andriamanitra mihitsy izany. Tsy tokony havelantsika oviana ny tahotra ny ratsy eo amin'izao tontolo izao satria mahatonga antsika tsy hijery hoe iza i Jesosy, inona no nataony ho antsika, ary izay zavatra nasaina ataontsika. Tsarovy fa manome toky antsika izy fa ny maizina dia tsy maharesy ny fahazavana. Na dia mahatsiaro labozia kely iray izay eo afovoan'ny haizin'ny maizina aza isika, na ny labozia kely iray aza dia manome fahazavana sy hafana ny aina. Na amin'ny fomba somary toa kely aza dia taratry ny fahazavan'izao tontolo izao i Jesosy. Na ny tombontsoa kely aza dia tsy misy tombony azo antoka.
Jesosy no fahazavan’izao tontolo izao, fa tsy ny Fiangonana ihany. Manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao Izy, fa tsy amin’ny mpino ihany. Noho ny herin’ny Fanahy Masina, tamin’ny alalan’i Jesosy, no nitondran’ny Ray antsika hiala tao amin’ny haizina ho amin’ny fahazavan’ny fifandraisana mahavelona amin’Andriamanitra Telo Izay Iray, izay mampanantena fa tsy hahafoy antsika mihitsy. Izany no vaovao tsara (ny filazantsara) ho an’ny olona rehetra eto an-tany. Iray amin’ny olona rehetra i Jesosy, na fantany na tsia. Ireo pasitera roa izay nifampiresaka tamin’ilay tsy mino an’Andriamanitra dia nahatonga azy hahatsapa fa zanak’Andriamanitra malala izy izay, indrisy, mbola miaina ao anatin’ny haizina. Fa raha tokony hanozona ny haizina (na ny lehilahy!), ny pasitera dia nisafidy ny hanaraka ny fitarihan’ny Fanahy Masina amin’ny fanatanterahana ny asa nanirahana ny Ray, miaraka amin’i Jesosy, dia ny hitondra ny vaovao tsara amin’ny tontolo ao anatin’ny haizina. Toy ny zanaky ny mazava (1. Tesaloniana 5:5), dia vonona ny ho mpitondra ny fahazavana izy ireo.
Nitohy ny alahady teo ny hetsika "Eo alohan'ny rindrina". Nisy olona tao amin'ny vondron'olona teo an-toerana namaly tsara ny fanasana ary nitsidika ny fiangonanay. Na dia maro aza dia tonga, tsy tonga ilay lehilahy niresahan'ireo pasitera roa. Tsy azo inoana fa hiseho eo amin'ny fiangonana amin'ny hoavy tsy fantatra. Fa ny fandehanana any am-piangonana dia tsy tanjon'ny resaka. Nomena zavatra hieritreretana ilay olona, ​​ka raha te hiteny voa iray dia nambolena tao an-tsaina sy ao am-pony. Angamba nisy fifandraisana nifandray teo aminy sy Andriamanitra izay hitohy foana. Satria zanak'Andriamanitra tokoa io lehilahy io, dia mahazo antoka isika fa hanohy hitondra ny fahazavan'Andriamanitra i Kristy. Ny lalan'ny fahasoavana dia mety hizara izay ataon'Andriamanitra amin'ny fiainan'ity lehilahy ity.
Andao isika tsirairay avy hanaraka ny Fanahin'i Kristy hizara ny fahazavan'Andriamanitra amin'ny hafa. Rehefa mihalehibe ny fifandraisantsika lalindalina kokoa amin'ny Ray, ny Zanaka sy ny Fanahy, isika dia mihamamiratra hatrany hatrany amin'ny fahazavana mamelombelona an'Andriamanitra. Mihatra amintsika tsirairay izany ary koa amin'ireo vondrom-piarahamonina. Mivavaka aho mba hiangona ireo fiangonantsika eo amin'ny sehatry ny fitaomana "ivelan'ny rindrin'izy ireo" ary hamela ny fanahin'ny fiainany Kristiana hitanjozotra. Tahaka ny fampidirantsika ny hafa ao amin'ny orinasantsika amin'ny alàlan'ny fanolorana ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny fomba rehetra, dia manomboka koa ny haizina ary ny fiangonantsika dia hanome taratra bebe kokoa ny fahazavan'i Kristy.
Hampamirapiratra aminao ny fahazavan’i Kristy